July 4, 2021 - Khitalin Media
July 4, 2021 by Khitalin Media
ရှားစောင်းလက်ပက်၏ အကျိုးကျေးဇူးများ ၁.ရှားစောင်းဂျယ်လီအနှစ်ကို မျက်ခွံပေါ်တင်ပေးပါကမျက်စိနာ၊ကိုက်၊ပူစပ်၊ယားယံခြင်းကိုသက်သာစေပါသည်။ ၂.နားထဲတွင်အနာပေါက်ခြင်း၊နားကိုက်ခြင်းနှင့် နားပိုးဝင်၍ ရောင်ကိုင်းခြင်း တို့တွင် ရှားစောင်းလက်ပပ် ၂ လက်မအရွယ်ကိုလှီးဖြတ်ကာ ထက်ခြမ်းခြမ်းပြီး နား၏အရှေ့ဘက်နှင့်အနောက်ဘက်တို့တွင် ကပ်၍ ဂျယ်လီအချွဲများဖြင့်နားအပြင်မှပွတ်ပေးခြင်းဖြင့် ရောင်ကိုင်းမှုများလျော့ကျကာ နာကျင်ကိုက်ခဲခြင်းကို သက်သာစေပါသည်။ ၃. ရှားစောင်းလက်ပတ်ကိုဖျော်ရည်သောက်ခြင်း သို့ ပါးပါးလှီး၍ချက်စားခြင်းဖြင့် ဓမ္မတာမှန်စေကာ အမျိုးသမီးမျိုးပွါးအင်္ဂါကို ခွန်အားဖြစ်စေရုံသာမက သားအိမ်ကိုသန့်စင်စေသည်။သွေးဆုံးပြီးနောက် မီးယပ်ရောဂါတို့ကိုလည်းမဖြစ်စေပါ။ ၄.ကျားမ အ င်္ဂါများရှိ ရေယုန်နာများကိုလည်း ဂျယ်လီအနှစ်လိမ်းပေးခြင်းဖြင့် သက်သာစေနိုင်သည်။ ၅.ရှားစောင်းလက်ပတ်၏အတွင်းပိုင်းရှိ ဂျယ်လီသည် အရေပြားတွင်အနီပိမ့်များ ထွက်ခြင်း၊အရေပြားတွင် အရည်အိတ်တည်ခြင်း၊အပူလောင်ခြင်း၊ဘက်တီးရီးယားနှင့် ပိုးမွှားများကြောင့်အရေပြားတွင် ပွေး၊ဝဲ၊ညှင်း စသည့် အရေပြားရောဂါ အမျိုးမျိုးကို သက်သာစေသည်။ ၆.ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းများ ပါရှိသဖြင့်အစာချေစနစ်ကိုအားပေးကာ အစာအိမ်နာခြင်း၊အစာမကြေခြင်းတို့ကိုသက်သာစေသည်။အထူးသဖြင့် အူမကြီးကင်ဆာအပါအဝင် ကင်ဆာအကျိတ်များ ကြီးထွားလာမှုကို ရပ်တန့်စေသည်။အစာအိမ်ပြည်တည်နာများ၊အသည်းရောင်ခြင်း၊အူရောင်ခြင်းဝေဒနာတို့ကိုလျော့ကျစေသည်။ ၇.သွေးထဲရှိ oxygen ကိုကောင်းစွာလည်ပတ်စေပြီးcell များကိုခွန်အားဖြစ်စေသည်။ … Read more
သေဒဏ်ချခံထားရတဲ့ သား၄ယောက်ထဲက သားအငယ်လေး သူ့အမေစီ ရေးလိုက်တဲ့စာ…..
ေသဒဏ္ခ်ခံထားရတဲ့ သား၄ေယာက္ထဲက သားအငယ္ေလး သူ႔အေမစီ ေရးလိုက္တဲ့စာ😢 “သားတို့ အခ်ိန္တန္ရင္ အေဖနဲ႔အေမဆီကို ေရာက္ေအာင္ျပန္လာခဲ့မယ္” တဲ့💔🥀 ေပ်ာ္လြန္းလို့ ကေနတာမဟုတ္ပါ။ သူ႔သား ေလးေယာက္စလုံး ေသဒဏ္ေပးခံရလို့ ႐ူးမတတ္ ငိုေႂကြးကာ စိတ္လြတ္ၿပီး ေသြး႐ူးေသြးတန္းနဲ႔ ကေနတာပါ။😢 သားေတြဆုံးရွုံးသြားလို့ မိခင္ခံစားရတဲ့ ေဝဒနာနဲ႔ထပ္တူ နာက်င္ရပါတယ္😥…..။ မအလေတြ အျမန္က်ဆုံးပါေစ။ unicode version သေဒဏ်ချခံထားရတဲ့ သား၄ယောက်ထဲက သားအငယ်လေး သူ့အမေစီ ရေးလိုက်တဲ့စာ😢 “သားတို့ အချိန်တန်ရင် အဖေနဲ့အမေဆီကို ရောက်အောင်ပြန်လာခဲ့မယ်” တဲ့💔🥀 ပျော်လွန်းလို့ ကနေတာမဟုတ်ပါ။ သူ့သား လေးယောက်စလုံး သေဒဏ်ပေးခံရလို့ ရူးမတတ် ငိုကြွေးကာ စိတ်လွတ်ပြီး သွေးရူးသွေးတန်းနဲ့ ကနေတာပါ။😢 သားတွေဆုံးရှုံးသွားလို့ မိခင်ခံစားရတဲ့ ဝေဒနာနဲ့ထပ်တူ နာကျင်ရပါတယ်😥…..။ မအလတွေ အမြန်ကျဆုံးပါစေ။
ျမန္မာဗုဒၶဘာသာဝင္ လင္မယားမ်ား ကြာရွင္းျခင္းအေၾကာင္း သိေကာင္းစရာ
ယခုတင္ျပသည့္ အခ်က္မ်ားအား ဆရာႀကီး ဦးျမစိန္ ေရးသားသည့္ ျမန္မာဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒ ( (၁၃) ႀကိမ္ ေျမာက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ထုတ္ေဝျခင္း) မွ မွီျငမ္း၍ အမ်ားသူငွာသိေစရန္ တင္ျပလိုက္ပါသည္။ ျမန္မာ့ဓေလ့ထုံးတမ္းဥပေဒအရ လင္ခန္းမယားခန္း ျပတ္စဲရန္ အဓိကအေၾကာင္း ၃ မ်ိဳးရွိေပသည္ ။ ၎တို႔မွာ ၁။ ႏွစ္ဦး သေဘာတူကြာရွင္းျခင္း ၂။ လင္ျဖစ္သူ ရဟန္းျပဳျခင္း ၃။ အိမ္ေထာင္ေရးျပစ္မႈ႕ေၾကာင့္ ကြာရွင္းျခင္း တို႔ျဖစ္ေပသည္။ အထက္ပါအခ်က္မ်ားမွ အမွတ္စဥ္ ၁။ ႏွစ္ဦးသေဘာတူကြာရွင္းျခင္း အေၾကာင္းကို ေအာက္ပါအတိုင္း ျပဌာန္း ဖြင့္ဆိုထား ပါသည္။ ” ျမန္မာဗုဒၶဘာသာမ်ားအဖို႔ အၾကင္လင္မယားအျဖစ္ အိမ္ေထာင္ျပဳ ျခင္းမွာ ေလာကီလူမႈ႕ေရးကိစၥသက္သက္မွ် ျဖစ္ၿပီး ျမန္မာ့႐ိုးရာယဥ္ေက်းမႈ႕ ဓေလ့ထုံးတမ္းအရ တစ္ဦး ႏွင့္ တစ္ဦး … Read more
အလွအပေရးရာနဲ႔ပတ္သက္လို႔ကြၽမ္းက်င္သူပညာရွင္ေတြက အုန္းရည္ဟာ အသာသးအရည္က်န္းမာဖို႔နဲ႔လွပေစဖို႔အက်ိဳးေက်းဇူးေတြအမ်ားႀကီးေပးႏိုင္တယ္လို႔ဆိုခဲ့ၾကပါတယ္။အုန္းရည္က အသားအရည္အတြက္ဘယ္လိုေတြအသုံးဝင္ အက်ိဳးရွိေနတာလဲ? *သဘာဝအာဟာရဓာတ္ေတြျပည့္ဝ အုန္းရည္ဟာ အာဟာရဓာတ္ေတြ၊ဗီတာမင္ေတြႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တဲ့ သဘာဝအသီးအႏွံတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါတယ္။အထူးသျဖင့္ အသားအရည္က်န္းမာလွပေစတဲ့ကယ္လ္စီယမ္ဓာတ္ေတြ၊ဗီတာမင္စီ၊ဗီတာမင္ေအ၊ဗီတာမင္ေက၊ပ႐ိုတင္း၊သံဓာတ္နဲ႔ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္ေတြႂကြယ္ဝစြာပါဝင္တယ္လို႔ ေဒါက္တာ Erin Gilbert ကေျပာထားပါတယ္။အုန္းရည္ေသာက္ေပးတဲ့အခါ ခႏၶာကိုယ္ထဲက အဆိပ္အေတာက္ေတြလည္းကင္းစင္သြားေစပါတယ္။ *ဝက္ၿခံတိုက္ထုတ္ေပးႏိုင္ အုန္းရည္မွာပါဝင္တဲ့ ပိုတက္ဆီယမ္နဲ႔မဂၢနီယမ္ဓာတ္ေတြဟာ ဝက္ၿခံျဖစ္ပြားမႈႏႈန္းကိုေလ်ာ့က်ေစပါတယ္။ဒါ့အျပင္ အုန္းရည္ဟာ မ်က္ႏွာအေရျပားေပၚက မလိုအပ္တဲ့အဆီပိုေတြထြက္ျခင္းကိုေလွ်ာ့ခ်ေပးႏိုင္ပါတယ္။ဒါေၾကာင့္ အုန္းရည္မၾကာခဏေသာက္ေပးျခင္းျဖင့္ ဝက္ၿခံေတြေလ်ာပါးသြားေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။အုန္းရည္တင္မက အုန္းသီးအသားကိုပါ စားေပးရင္ အသားအရည္အတြက္ပိုၿပီးေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ *အသားအရည္ႏုပ်ိဳေစ အုန္းရည္ဟာ အသားအရည္ဆဲလ္ေသေတြကိုဖယ္ရွားေပးၿပီး ဆဲလ္အသစ္ျပန္လည္ေမြးဖြားဖို႔ကိုအေထာက္အကူျဖစ္ေစပါတယ္။ပ႐ိုတင္းပါဝင္တဲ့အတြက္ အသားအရည္ဆဲလ္ေတြရဲ႕လုပ္ေဆာင္ပုံကိုပိုေကာင္းမြန္ေစၿပီး အသားအရည္ကိုပိုႏုပ်ိဳေစကာေနေရာင္ေၾကာင့္ထိခိုက္ပ်က္စီးမႈမျဖစ္ေအာင္လည္းကာကြယ္ေပးႏိုင္ပါတယ္။ *ေရဓာတ္ျဖည့္ေပး အုန္းရည္ကို Cleanser အျဖစ္လည္းသုံးလို႔ရတယ္လို႔ ေဒါက္တာ Gilbert က ေျပာထားပါတယ္။အုန္းရည္ကိုမ်က္ႏွာအသားအရည္အေပၚအသုံးျပဳမယ္ဆိုရင္ မ်က္ႏွာကိုသန႔္စင္ေပးသလိုေရဓာတ္လည္းျဖည့္ေပးတယ္။အသားအရည္ေျခာက္ေသြ႕တာ၊ယားယံတာေတြလည္းသက္သာေစၿပီး အဆီပိုေတြဖယ္ရွားေပးတယ္လို႔သိရပါတယ္။တစ္ပတ္ကို ၂ႀကိမ္၊သုံးႀကိမ္ေလာက္ ေပါင္းတင္ေရဓာတ္ျဖည့္တဲ့အေနနဲ႔ လုပ္ၾကည့္သင့္ပါတယ္။ *ခႏၶာကိုယ္က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ေစ အုန္းရည္ကိုမၾကာခဏေသာက္သုံးေပးတာဟာ ကိုယ့္က်န္းမာေရးကိုယ္ဂ႐ုစိုက္ေပးေနတာပါပဲ။အုန္းရည္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့သဘာဝအာဟာရဓာတ္ေတြပါဝင္ၿပီးသားျဖစ္လို႔ က်န္းမာေရးေကာင္းဖို႔အေထာက္အကူျပဳသလို အသားအရည္ကိုလည္းပိုၿပီးလွပလာေစပါတယ္။ သတိျပဳရမွာကေတာ့ အုန္းရည္ကိုအမ်ားႀကီးမေသာက္ဖို႔ပါပဲ။သၾကားဓာတ္နဲ႔ပိုတက္ဆီယမ္ဓာတ္အရမ္းမ်ားသြားရင္ … Read more
အိမ်ရှင်မတွေ ကြက်ဥခွံတွေကို လွှင့်မပစ်ပါနဲ့ ကြက်ဥခွံအသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်း(၁၂)မျိုး
ဒါကိုသိရင် ကြက်ဥခွံလေးတွေကို လွှင့်ပစ်မိမှာ မဟုတ်တော့ဘူး ကြက်ဥခွံတွေကို ပြန်ပြီး အသုံးပြုနိုင်တဲ့နည်း(12)မျိုး ကြက်ဥဆိုတာ အာဟာရဓါတ်တွေ ပြည့်ဝနေတဲ့ အစားအစာတစ်ခု ဆိုတာ လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ကြက်ဥစားပြီးရင် ကြက်ဥအခွံတွေကို လွှင့်ပြစ်လိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ဒီအချက်လေးတွေကို ဖတ်ကြည့်ပြီးရင်တော့ ကြက်ဥခွံတွေ လွှင့်ပစ်ခဲ့တာ ငါတော်တော်မိုက်မဲပါလား ဆိုတဲ့ အတွေးမျိုးတွေးမိမှာ အမှန်ပါဘဲ။ဒါကြောင့်မို့ အသုံးဝင်တဲ့ကြက်ဥအခွံတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချကြမလဲ ဆိုတာ ဖတ်ကြည့်ရအောင်။ (၁) ခရမ်းချဉ်ပင်တွေကို သန်စွမ်းစေတယ်ဟုတ်ပါတယ်။ခရမ်းချဉ်ပင်တွေကို ကြက်ဥခွံတွေက အကျိုးပြုပါတယ်။ကြက်ဥခွံတွေကို ခြေမွပြီးတော့ခရမ်းချဉ်ပင်ရဲ့ အမြစ်အနီးတွင်းတူးပြီး ထည့်လိုက်ရပါမယ်။ကြက်ဥခွံဟာ ကယ်ဆီယမ် ကြွယ်ဝတဲ့အတွက်ခရမ်းချဉ်သီးပင်တွေ လိုအပ်တဲ့ ကယ်ဆီယမ်ဓါတ်ကို ပေါပေါများများရရှိစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ (၂) သန့်ရှင်းရေးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ကြက်ဥခွံကို အော်ဂဲနစ် သန့်ရှင်းရေးသမားလို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ ကြက်ဥခွံဟာ မီးဖိုချောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့ကြေးညှော်တွေ၊ မှိုင်း တွေ၊ အိုးမဲတွေနဲ့ ဆီအညစ်အကြေးတွေကို သန့်စင်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြုလုပ်နည်းကတော့ ကြက်ဥခွံကို အခြောက်လှန်းပြီး အမှုန့်ဖြစ်အောင် … Read more
ကမ္ဘာ့လွှမ်းမိုးမှုအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ် ၁၀၀စာရင်း၌ အမေစု နံပါတ်၂နေရာရောက်
ကောင်းလိုက်တဲ့အမေ့ရဲ့ ဖြတ်ထိုးညာဏ် အမေရိကန်နိုင်ငံတက္ကသိုလ်က ပြန်လာတဲ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက် ပြန်ပြောပြတဲ့အဖြစ်အပျက်လေးပါ။ သူမမြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို့ အမေရိကားလေယာဉ်ကွင်းမှာ လေယာဉ်တက်ဖို့အလုပ် သူမသယ်ဆောင်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေကို တန်ပိုစစ်ပါတော့တယ်။ သူမသယ်လာတဲ့ပစ္စည်းတွေထဲမှာ စာအုပ်စာပေကောင်းတွေအများကြီး ဝယ်လာတယ်။ ဗီဒီယိုဖိုင်အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည် ဒီလိုနဲ့အမေရိကန်အရာရှိကသူမရဲ့ပစ္စည်းတွေကို ကတ္တားပေါ်တင်လိုက်တော့အနည်းငယ် တန်ပိုနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။ ဒါ့ကြောင့်သူမပစ္စည်းတွေထဲကမလိုအပ်သော အရာကိုထားခဲ့ဖို့အရာရှိကပြောပါတယ်။ သူမအတွက်ကတော့အရာရာတိုင်းက အရေးကြီးသောပစ္စည်းချည်းဖြစ်နေတာပေါ့။ ဒီတော့သူမလဲမဆိုင်းမတွဘဲ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးတွေကိုဆွဲခွာပစ်လိုက်ပြီး ကဲအရာရှိမင်းပြန်ချိန်လို့ရပါပြီတဲ့။ စာအုပ်မျက်နှာဖုံးဆိုတာစာအုပ်တစ်အုပ်မှာ အလေးဆုံးအရာတစ်ခုမဟုတ်လား။ အမေရိကန်အရာရှိလည်းအံ့သြမှင်သက်စွာနဲ့ သူမကိုငေးကြည့်နေတော့တာပေါ့။ ဒါနဲ့တန်ပိုပြန်စစ်လိုက်တယ်။OKသွားတယ်။ သူမလိုချင်တာအားလုံးမြန်မာပြည်ကို သယ်ဆောင်သွားလို့ရသွားပြီလေ။ အမေရိကန်အရာရှိလည်း သူမရဲ့ဥာဏ်ရည်ထက်မြတ်မှုကို မလေးစားဘဲမနေနိုင်တော့ဘဲ WHERE DO YOU COME FROM? မင်းဘယ်နိုင်ငံကလာတာလဲ? လို့သူမကိုမေးလိုက်တော့ ကျမမြန်မာနိုင်ငံကလာတာလို့ပြန်ဖြေတယ်။ အမေရိကန်အရာရှိပြန်ပြောတဲ့စကားက ဒီပို့စ်တစ်ခုလုံးရဲ့အနှစ်သာရလေးပါပဲ။ အော်မင်းက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နိုင်ငံကလာတာကိုး ဒါ့ကြောင့်မို့လည်း ဒီလောက်တော်နေတာကိုးတဲ မြန်မာလို့ အမေရိကန်မှာတောင် ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားပြနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမတို့မြန်မာလူမျိုးတွေမညံ့ပါဘူး။ နှစ်ပေါင်းများစွာ လူညံ့တွေမင်းမူသွားခဲ့ကြလို့ ကျမတို့ဦးနှောက်တွေငုတ်လျိုးသွားခဲ့ရတာပါ။ … Read more
ခေတ်ကြီးက တိုးတက်တာ မြန်ဆန်နေပါတယ်နော်။ ရှေးခေတ် မိန်းကလေးတွေလို အိမ်မှာပဲ နေလို့ ရတဲ့ ခေတ်လည်း မဟုတ်တော့ပါဘူး။ မိန်းကလေးတွေရဲ့ အခန်းကဏ္ဍတွေလည်း မြင့်တက်လာလျက်ရှိနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိန်းကလေးတွေကတော့ ရှေးရိုးစွဲ အမြင်တွေကနေ ဖောက်ထွက်နိုင်ဖို့ ကြိုးစားနေရတုန်းပါ။ “မိန်းကလေးဆိုတာ” ကနေ အစချီပြီး မိန်းကလေးဆိုတာ ဒီလို ဖြစ်ရမယ်ဆိုပြီး လူတွေက သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က အဲ့ထက်ပိုပြီး အရေးတကြီး သိဖို့ လိုအပ်တာတွေက ၂၁ ရာစုမှာ ရှိလို့ နေပါတယ်။ (၁) ဓမ္မတာလာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်တဲ့ အသိ မိန်းကလေးတွေကြားထဲမှာ ဓမ္မတာ လာခြင်းနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ရှေးယခင်က နိမ့်ကျတဲ့ အရာလို့ သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ တကယ်က ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ ဇီဝ ဖြစ်စဉ် တစ်ခုပါပဲ။ ဇီဝ ဖြစ်စဉ် … Read more
အခုလိုအခ်ိန္မ်ိဳးမွာလာေရာက္လႉဒါန္းေပးတာမို႔ တခ်ိဳ႕သက္ႀကီးဘိုးဘြားမ်ား ပီတိမ်က္ရည္မ်ားပင္က်ေနတာေၾကာင့္ သူမအလွည့္မွာလဲ အိုဇာတာေကာင္းဖို႔ဆုေတာင္းလိုက္တဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ..
ပရဟိတ လုပ္ငန္းေတြကို အားသြန္ ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားေဆာင္႐ြက္ ေနၿပီး ျပည္သူေတြ လိုအပ္တာမ်ား တတ္ႏိုင္သေလာက္ ကူညီေပးေနသူကေတာ့ သ႐ုပ္ေဆာင္ခိုင္ႏွင္းေဝပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ခိုင္ႏွင္းေဝက ရင္ေသြးေလးမ်ားေဂဟာကို တည္ေထာင္ထားၿပီး လူမမယ္ ကေလးမ်ားကို ေႏြးေထြးတဲ့ ေမတၱာ မ်ားျဖင့္ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ ေပးေနတာ လည္းျဖစ္ပါ တယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း လူတိုင္းအေပၚ ကူညီခ်င္ စိတ္ရွိတဲ့ ခိုင္ႏွင္းေဝ ရဲ႕ စိတ္ထားကိုေတာ့ ပရိသတ္မ်ားက ခ်ီးက်ဴးေနၾကတာ ျဖစ္ပါတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနေတြေၾကာင့္ စားဝတ္ေနေရး အဆင္မေျပ ၾကသူမ်ားကိုလည္း စားနပ္ ရိကၡာမ်ား လႉဒါန္းေပးေန တာကိုလည္း ၾကည္ႏူးဖြယ္ ျမင္ေတြ႕ၾကရမွာပါ။ သူမကေတာ့ ဘာသာေရး ကိုင္းရႈိင္းလြန္းသူ တစ္ေယာက္ျဖစ္ၿပီး အဓိဌာန္မ်ားလည္း မၾကာခဏ ဝင္ေရာက္ေလ့ရွိသူ ျဖစ္ပါတယ္။ ယေန႔မွာလည္း သက္ႀကီး ဘိုးဘြားမ်ား … Read more
ဒီနေ့က စပြီး အိမ်မှာထမင်းချက်တဲ့အခါ ဆန်ဆေးရည် တွေကို လုံးဝ မသွန်ပစ်ပါနဲ့တော့သင့်အိမ်က ဆန်ဆေးရည်တွေကို အကျိုးရှိမဲ့နေရာ တစ်ခုခုမှာ မသုံးစွဲဘဲ သွန်ပစ်နေခြင်းမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနှင့်ဆန်ဆေးရေ ရဲ့ အစွမ်း အံ့မခန်း အသုံးဝင်ပုံစရိတ်နည်း ဖို့ ဒီလိုအစပြုပါ။ သင့်အိမ်က ဆန်ဆေးရည်တွေကို အကျိုးရှိမဲ့နေရာ တစ်ခုခုမှာ မသုံးစွဲဘဲ သွန်ပစ်နေခြင်းမျိုး လုံးဝမလုပ်ပါနှင့်။ အထူးသဖြင့် သင်ဟာစိုက် ပျိုးရေးနဲ့ ပါတ်သက် ဆက်နွယ်နေသူတစ်ဦး ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် ပိုလို့တောင် ဆင်ခြင် သင့်ပါတယ်။ ဆန်ဆေးရည်မှာ ဘာတွေပါသလဲဆိုရင် သက်ရှိများကို အကျိုး ပြုနိုင်သော ဓါတ်အဟာရတွေ မြောက်များစွာ ပါဝင်နေပါတယ် လို့သာ အလွယ်မှတ်လိုက်ကြပါစို့။ အိုမင်းရင့်ရော်ခြင်းကို ဟန့်တား စေနိုင်ခြင်း၊ မဖြစ်မနေကျိုးရမဲ့ “သွား” တွေကို ခိုင်ခန့်စေနိုင်ခြင်းနှင့် ဖြူသွားတဲ့ “ဆံပင်”တွေ တဖန်ပြန်ပြီး … Read more